चितवनमा एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु , जर्वजस्ती नारायणी सामुदायिकको आईसियुबाट निकालेर भरतपुर अस्पताल पठाईएको थियो
आइतवार, असार २८, २०७७ ०९:२२:०६ युनिकोड
नेकपा फुट्न दिन्न : प्रचण्ड
आज ८२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या १६ हजार ८०१ पुग्यो
नेपाली कांँग्रेस चितवन कार्यसमितिमा पौडेल मनोनित
गैंडाकोटका ५ सय घर डुबानमा
अबैध मृगौला प्रत्यारोपणको अभियोगमा पुरानो मेडिकल कलेजका ४ डाक्टर सहित ६ जना पक्राउ
अपडेट : म्याग्दीमा बेपत्ता मध्ये २० जनाको शव भेटियो, १३ अझै बेपत्ता
मंगलबार, जेठ २७, २०७७ सत्यकलम संवाददाता
चितवन : चितवनको नारायणी सामुदायिक अस्पतालमा उपचाररत एक कोरोना संक्रमित बिरामीलाइ अस्पतालले जर्वजस्ती आईसियु बाट निकालेर भरतपुर अस्पतालमा स्थानान्तरण गरेपछि उनको मृत्यु भएको छ । सोमबार कोरोना संक्रमण पुष्टी भएका भरतपुर ११ का ६८ बर्षीय पुरुषको मंगलबार बिहान ७ बजेर ५ मिनेट जाँदा मृत्यु भएको भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारीले बताए । उनि दम रोगबाट ग्रसित थिए र नारायणी सामुदायिक अस्पतालको आईसियुमा उपचार भइरहेको थियो । उनलाई भेण्टलिेटर चाहिने अबस्थामानै नारायणी सामुदायिक अस्पतालबाट निकालेर भरतपुर अस्पताल पठाईएको थियो ।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले आफुले बिरामीलाई अन्यत्र नसार्न भनेको बताए । उनले भने,“मैले नारयणी सामुदायिक अस्पतालका डा भक्तमानलाइ फोन गरेर बिरामीलाइ अन्यत्र नसार्न भनेको थिए , तर मलाइ समेत थाहा नदिई भरतपुर अस्पताल लगिएछ । यसमा लापरवाही देखियो ।” उनले भेण्टिलेटरको सहायतामा उपचार भइरहेको बिरामीलार्ई बिरामीलाइ त्यहाँबाट सार्नुनै गलत भएको बताए । “यसबारेमा म बुझ्दैछु , कोहि दोषी ठहरिए कारवाही हुन्छ । ” उनले भने ।
भरतपुर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा.श्रीराम तिवारीले पनि ति कोरोना संक्रमित बिरामीलाइ अन्यत्र नसार्न र त्यही उपचार गर्न भनेका थिए । तर नारायणी सामुदायिक अस्पतालको व्यवस्थापनले ति बिरामीलाइ जर्वजस्ती भरतपुर अस्पताल पठाएको थियो । आईसियुमा भेण्टीलेटरको सहायतामा उपचार गराईरहेका बिरामीलाइ कोरोना संक्रमण पुष्टी भएपछि अस्पताले स्थानान्तरण गरेको हो ।
नारायणी सामुदायिक अस्पतालका अध्यक्ष डा. भक्तमान श्रेष्ठले सरकारको निति अनुसारनै उनलाइ स्थानान्तरण गरेको बताए । उनले भने,“कोरोना संक्रमण देखिएपछि हामीले उपचार गर्ने हैन , सरकारीमा पठाउनु पर्छ त्यही भएर बिरामीलाइ पठाईएको हो ।” उनले सत्यकलम संवाददातादाइ अमेरिकाको उदाहरण दिंदै कोरोना संक्रमितलाइ भेण्टिलेटरमा राख्नु झन् खतरा हुने बताए । उनले भने,“ पुष्टी भएपछि त सरकारले हेर्छ , हामीले मिल्दैन त्यही भएर पठाएको हो ।” डा श्रेष्ठले यस्तो बताएपनि चितवनको स्थानीय प्रशाशनले ति बिरामीलाइ अन्यत्र नसार्न भनेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशको समेत उलंघन गरेर आफुखुशी नारायणी सामुदायिक अस्पतालले बिरामी भरतपुर अस्पताल पठाएको थियो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २७, २०७७, ०८:४१:००
भारतिय च्यानल बन्द भएपछि चितवनका एक डाक्टरको आपत्तीजनक अभिव्यक्ती
चितवनमा पनि आयो सलह , सतर्क रहन कृषि ज्ञान केन्द्रको आग्रह
नेकपा फुट्न दिन्न : प्रचण्ड आइतवार, असार २८, २०७७
नवलपुरमा थप १७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि , जिल्लामा संक्रमितको संख्या ६६ पुग्यो बुधवार, असार ३, २०७७